नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक रेलको ड्राइभर चाहीँ भारतीय ! | गृहपृष्ठ
Home समाचार नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक रेलको ड्राइभर चाहीँ भारतीय !
on: १२ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:३४ समाचार
चैत १२, काठमाडौं (अस) । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको तयारीमा सरकार तीव्र रुपमा लागिरहेको छ । नेपाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक दुई ओटा रेल किन्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । यसका लागि सरकारले रेल विभागलाई करीब ८५ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइदिएको छ ।
सरकारले भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बनाइएको दुई नयाँ रेल किन्ने तयारी गरेको छ । रेल सञ्चालनको करीब १०० वर्षको इतिहास भएको नेपालमा नयाँ रेलका लागि आवश्यक दक्ष ड्राइभर अर्थात् रेल चालक भने छैनन् । विसं १९८३ मा भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म र विसं १९९३ मा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालन भएका थिए । हाल दुबै बन्द भइसकेका छन् । कोइलाबाट चल्ने ‘न्यारोगेज’ रेल मात्रै चलाएको अनुभव भएको नेपालका लागि डिजेलबाट चल्ने ती ‘ब्रोडगेज’ रेलको अनुभव छैन । यसै कारण नयाँ रेल चलाउन नेपाली जनशक्ति तयार नभएसम्म भारतबाट चालक ल्याइने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको भनाइ छ ।
महानिर्देशक मिश्रका अनुसार कम्तीमा एक वर्षका लागि भारतबाट चालक ल्याएर रेल चलाउने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । यसका साथै रेलको मर्मतका लागि पनि प्राविधिकहरु चाहिने भएकाले त्यो पनि निश्चित समयका लागि भारतबाट ल्याइने भएको छ ।
मङ्सिरमा चढ्न नपाएको जनकपुर-जयनगर रेल अब कहिले ?
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १२:३०